IN KA BADAN 20 qof OO LAGU DILAY GOBOLKA BENISHANGUL GUMUZ – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA IN KA BADAN 20 qof OO LAGU DILAY GOBOLKA BENISHANGUL GUMUZ
Weerar cusub oo ay “dabley aan la garanayn” ka geysteen Bengez Kebele, Dangur Wereda oo ka tirsan gobolka Benishangul Gumuz ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof oo rayid ah, sida ay wakaaladda wararka u faafisa ee Amhara Mass Media ka soo xigatay dadka deegaanka. Warkan waxaa xaqiijiyay maamulka deegaanka.
Weerarka ayaa dhacay subaxnimadii hore ee saaka abaare 4:00 AM waqtiga maxaliga ah, sida warka lagu sheegay. Isaga oo taleefanka kula hadlayey AMMA, maamulka deegaanka Demilew Bengez ayaa sheegay in masuuliyiintu ay ka cabsi qabaan in weerarku soo dhowaado laakiin maadaama oo uu dhacay habeenkii ay ahayd wax aan macquul aheyn in laga hortago oo la soo qabto kuwii ka dambeeyay.
Desalegn Idriss, maamulka Dangur Wereda ayaa dhankiisa sheegay in howlo aan caadi aheyn aysan ka jirin aaga la sheegay in ciidamada amaanka loo diray oo ay kormeerayaan aaga, wararka ayaa intaa sii raaciyay. “Marka la fiiriyo sirdoon hore oo ku saabsan weerarada soo socda, waxaan ku wargalinay dadka deegaanka inaysan joogin aagagga, sikastaba ha ahaatee wax war ah kama hayno sida ay dadka barakacayaasha ah dib ugu noqdeen [aaga],” AMMA ayaa ka soo xigatay Desalegn isagoo yiri, waxayna intaa ku dartay inay baareyso faahfaahinta ku saabsan weerarada.
Warku wuxuu yimid wax ka yar toban maalmood ka dib toddobaadyo weeraro dheer oo ay qaadeen maleeshiyo aan weli la shaacin, oo si aad ah u hubaysan oo ku sugan deegaanno kala duwan oo ka tirsan aagga Metekel, gobolka Benishangul Gumuz, ayaa ka tegey tirooyin aan la garaneyn oo sababa rayid iyo burbur hantiyeed. Bayaan ay soo saartay Ciidamada Difaaca Itoobiya ee loo soo gaabiyo ENDF ayaa lagu qirey in ciidamadoodu ay xaqiijiyeen sii deynta 27 qof oo rayid ah oo ay afduubeen rag hubaysan isla markaana xubnahooda ay xireen kuwii ka masuulka ahaa weeraradii ka dhacay Degmooyinka Bulen, Wenbera, Guba, Dibati, Dangur iyo Mandura. Bayaanka ka soo baxay Taliska ENDF ee Galbeedka ayaa lagu sheegay in xubnahooda ay gacanta ku hayeen amniga aaga ilaa iyo bishii Sebtember 06 markii ay casuumaad ka heleen gobolka Benishangul Gumuz.
Horaantii maanta, saraakiisha federaalka ee wasaarada dakhliga iyo kastamka iyo waliba saraakiil sar sare oo ka socda Amxaarada iyo Benshangul Gumuz ayaa booqday dad rayid ah oo barakacayaal ah oo dhibanayaal ka yihiin weeraradii ka dhacay Bulen Wereda waxayna siiyeen cunno iyo alaabo kale oo muhiim ah.
Bishii Sebtember 23, xafiiska nabadgelyada iyo amniga ee gobolka Benishangul Gumz wuxuu sheegay in 371 tuhmane la qabtay seddexdii maalmood ee la soo dhaafay oo lala xiriirinayo rabshadihii lala beegsaday xubnaha bulshada rayidka ah ee Bulen Woreda, oo ah aag ay ku nool yihiin bulshooyinka Amxaarada, Shinasha, Gumuz iyo Agew. .
Sida laga soo xigtay Xafiiska, 13 tuhmane oo dheeri ah iyo siddeed hub oo kala duwan ayaa lala wareegay maalintii 22-kii Sebtember 22, Abera Bayata, oo ah madaxa Xafiiska Nabadda iyo Amniga ee Gobolka, wuxuu intaas ku daray in shan tuhmane lala qabtay lix hub ah, oo ay ku jiraan Jim-3 iyo 5. Kalashnikov, oo ku yaal xaafadda Epar ee degmada Bulen.
Sidoo kale, Abera wuxuu sheegay in shan tuhmane oo si toos ah ugu lug lahaa shaqaaqadii ka dhacday Melkan Kebele ee Wombera Woreda lala xiray labadooda Kalashnikov ka dib dadaal ay iska kaashadeen ciidamada amniga ee heer gobol iyo heer federaal iyo bulshada.
“Howlaha fulinta sharciga si loo ilaaliyo sharciga ayaa laga wada wadaa dhamaan aaga Metekel” ayuu u sheegay xafiiska isgaarsiinta ee gobolka isagoo intaa ku daray in la qabtay labo tuhmane oo ku sugan degmada Dangur iyo mid kale oo ka tirsan Guba Woreda. Hoggaanka, ciidamada amniga ee heer federaal iyo heer gobol iyo bulshada ayaa sii wadi doona xoojinta shaqada la qabanayo si loo ilaaliyo ku dhaqanka sharciga aagga. ” Abera ayaa yiri.
Previous articleWajaale : Afar Qof oo ku Dhintay Dhisme Ku Dumay
Next articleGeedaha Ama Dhirta Fiitamiinada Kordhaya!
Kanada .. Trudeau ayaa ku guuleystey xilli labaad, in kasta oo...
Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Wasiirka arrimaha dibedda Norway oo ka wada...